(L) Dopamine Controls ရွေးချယ်မှု (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
(L) Dopamine ရွေးချယ်မှု (2010) ထိန်းချုပ်မည်
မှတ်ချက်များရိုးရှင်းတဲ့ဆောင်းပါး။ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာ၊ dopamine receptors သို့မဟုတ် dopamine level ပြောင်းလဲမှုများသည်သင်၏အမြင်နှင့်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုက dopamine စနစ်ကိုပြောင်းလဲစေသည်.
လူများ၏စိတ်အခြေအနေကိုသတ်မှတ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ with မှပါဝင်သောဓာတုဓာတ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Dopamine သည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များအပေါ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုသုတေသနကအကြံပြုသည်.
ကျွမ်းကျင်သူတ ဦး ကမူရလဒ်များသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍“ အူအတွင်းခံစားမှု” ၏အရေးပါမှုကိုပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာပုံရိပ်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအတှေ့အကွုံခံစားဘယ်လောက်ချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ထဲမှာအချက်ပြမှုတွေ့ရှိသောတက္ကသိုလ်ကောလိပ်လန်ဒန်အသင်းကယခင်သုတေသနအောက်ပါအတိုင်း။ သူတို့က signal ကိုအလှည့်အတွက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအချက်ပြ dopamine သောသံသယနှင့်တကွ, သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ dopamine စနစ်အနှောင့်အယှက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကလူရှုပ်ထွေးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအောင်ဘယ်လိုစမ်းသပ်ဖို့လေ့လာမှုတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 61 သင်တန်းသားများကိုဂရိနိုင်ငံအနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့, 80 အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်များစာရင်းကိုပေးထားနှင့်တဦးတည်းခြောက်လမှတစ်စကေးပေါ်သူတို့ကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
Neuro-ပုံရိပ်များအတွက် Tali Sharot Wellcome Trust မှ Center က "Dopamine သူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အပျြောအပါးအချက်ပြနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်"
သူတို့ဟာထို့နောက်သကြားဆေးလုံးပေးထားနှင့်ခရီးစဉ်၏ 40 ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့စိတ်ကူးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့နောက်သုတေသီများသည်အခြားအားလပ်ရက်များကိုမြင်ယောင်ရန် ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine ပါဝင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင်အသုံးပြုသော L-Dopa ဆေးကိုပေးခဲ့သည်။
သူတို့သည်နောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့သည်နေရာများ rated, သူတို့အားလပ်ရက်၏တွဲစာရင်းထဲကသွားကြဖို့ပိုနှစ်သက်မယ်လို့ဘယ်မှာတစ်ရက်အကြာတွင်သူတို့မေးမွနျးခဲ့သညျ။
အားလပ်ရက်ရွေးချယ်စရာ rating အခါအပို dopamine လူတွေပိုမိုမြင့်မားသောမျှော်မှန်းချက်ကိုပေး၏။
UCL မှာ Neuro-ပုံရိပ်များအတွက် Wellcome Trust မှ Center မှလေ့လာမှုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာ Tali Sharot, ကပြောသည်လူသားမြားသညျထိုကဲ့သို့သော ယူ. တစ်မိသားစုကိုစတင်ရန်ရှိမရှိအဘယျသို့အလုပ်ကဲ့သို့သောအခြားတိရစ္ဆာန်များထက် ပို. ရှုပ်ထွေးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို, လုပ်. , က dopamine သလိုပဲအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား သော။
"ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်ဖြတ်လမ်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်" ပါမောက္ခဆရာယောဟနျ Maule လိဒ်တက္ကသိုလ်မှ
“ လက်တွေ့ကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များချသည့်အခါအခြားရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသောအခါ dopamine သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များမှမျှော်လင့်ထားသည့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအချက်ပြရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ results မှရလဒ်များဖော်ပြသည်။
ဒေါက်တာ Sharot သူတို့ရဲ့ dopamine စနစ်ကအလုပ်မဖြစ်ခဲ့သောကွောငျ့စွဲ, သူတို့ကဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်လောင်းကစားဖြစ်, တစ်ခုခုကနေရရှိမညျ့အပျြောအပါးမတန်တဆများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနသူတို့လုပ်သောရွေးချယ်မှုကြောင့်လွှမ်းမိုးမှုခံရမယ်လို့ထားသည်ကဆက်ပြောသည်။
သူမကဆက်ပြောသည်မှာ“ အခြေအနေတော်တော်များများမှာငါတို့မှာ dopamine function ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်ဆိုတာသိပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေကဒီဆေးတွေကိုပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ ”
လိဒ်မှာပါမောက္ခဆရာယောဟနျ Maule, ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး,
တက္ကသိုလ်စီးပွားရေးကျောင်းမှပြောကြားသည်မှာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူတို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်“ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ” ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်လူ့ရွေးချယ်မှုများ၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်ကိုသဘောပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“ တစ်ချိန်တည်းမှာမင်းအဲဒီဖြစ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ၊ ဒါကြောင့်ဒီရလဒ်တွေကိုမြင်ရတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်တွေလိုစိတ်ခံစားမှုအခြေခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါ။
Published: 2010 / 01 / 08 17: 16: 11 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်